Zimbabwe's court freed anti-Mugabe pastor » News agency Vector News English
Georgia gets visa-free regime with EU - EU Council Ukraine's Avdiivka without power again, houses heated by coke plant Two Ukrainian soldiers killed over past 24 hours in Donbas area - Ukraine's military Ukrainian MP Oleksiy Honcharenko's kidnapping prevented in Odesa, culprits detained Zimbabwe's court freed anti-Mugabe pastor
14.07.2016, 10:16, World » Society » World. Main
Supporters of a Zimbabwean pastor celebrated outside a court in Harare after hearing that he's been freed.Evan Mawarire was accused of trying to overthrow the government by calling for protests against President Robert Mugabe's government. The Baptist minister's internet campaign tapped into mounting anger over corruption and high unemployment, sparking Zimbabwe's biggest demonstrations in a decade.The court dismissed the case as prosecutors presented different charges from those read out to Mawarire when he was arrested. "I want to thank you all Zimbabweans because we are now united. May the Lord bless you all because the country you are building is for your children. Let's continue building, don't stop. God bless you all," said Evan Mawarire.Read also: Zimbabwean preacher charged of inciting public violence for his calls to "stay at home" protests Last month, he posted a video online that went viral, venting anger about the state of the country and urging people to hold the government to account. Zimbabwe was once one of Africa's most promising countries. Now it's trapped in an economic crisis with a reputation for human rights abuses..
» Zimbabwean preacher charged of inciting public violence for his calls to "stay at home" protests» Angola has sentenced a rapper and his book club to prison» Brazil's crisis deepens as judge blocks Silva's appointment» Poland increases government surveillance powers despite protests» Stratfor: Moldova finally appoints Govt amid protests» Romanian PM Victor Ponta resigns after nightclub fire protests (VIDEO)